ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် ထောင်အနှစ် ၃၀ ကျ- BBC News မြန်မာ 5
မေလ ၂၂ ရက် - ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
- တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အဂတိလိုက်စားမှု လေးမှုနဲ့ တိုင်းတရားလွှတ်တော်က ထောင်အနှစ် ၃၀ ချမှတ်၊
-ကမ္ဘာတဝန်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ ငါးသန်းတစ်သောင်းကျော်သွားပြီ၊
- အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့တွေ ပိုများလာချိန်မှာ နယူးယောက်က လူချမ်းသာ မိသားစုတွေလည်း အခမဲ့ စားစရာဝေတဲ့ နေရာဆီ သွားတန်းစီနေ၊
-ခရီးသည် ၁၀၀ ကျော်ပါတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်တစင်း ကရာချိမြို့ လူနေရပ်ကွက်ထဲပျက်ကျ၊
-သိုးထိန်းနိုင်တဲ့ စက်ရပ်ခွေးအကြောင်း အပါအဝင် နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာသတင်းတွေပါတဲ့ ကလစ် အစီအစဉ်၊
-ထိုင်းနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကနံရံဆေးရေး ပန်းချီတွေ ချယ်မှုန်းပြီး ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေကို ဂုဏ်ပြု၊
ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က အခုလိုမ်ဳိး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအထိ အေရးယူတာမေတြ႔မိဘူးေနာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတာက သူတို႔အတြက္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ လိုျဖစ္ေနေတာ့ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေရးမယူခဲ့တာ ထင္ပါတယ္
အခုအရပ္သားအစိုးရ တက္လာမွပဲ အခု မၾကားဖူးတာေတြ ၾကားရ မျမင္ဖူးတဲ့ဟာေတြ ျမင္ရနဲ႔ လက္သန္း မွင္စြန္းခဲ့ေန႔ေတြကို ျပန္ေတြးတိုင္း ဂုဏ္ယူေနမိတုန္းပဲ
Author — Ye Naung
သမၼတအသစ္ေျပာင္း/ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္/လူသားျခင္စာနာေထာက္
Author — SSS S
ယောဂီဝတ်အမျိုးသမီကြီး အမှု ဖော်ပေးပါဦး
Author — Thura 78
Author — phyo gyimdy
လုပ်လို့ရတဲ့လူကို ဘဲလုပ် ဒါ ပါကွာ
ကလေး မုဒိန်း မှုတွေတောင်ပျောက်ကုန်တယ်😁😁😁😁😁
Author — Dee Awng
တစ္ျခား ဌာနေတြကိုလည္းစံုစမ္းၿပီး အေရးယူေပးပါ
ျပည္သူ႕ ပါတီ NLD
ပြည်သူကိုဃ်စားလှယ်များအားလုံး မြေခွေးတွေ လိုကောက်ကျက်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါစေ
Author — Carr Yang
ကျနော်ပြောဖူးပါတယ် တနသာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ဥပဓိရုပ်မကောင်းဘူးလို့ အခုတော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ လာဘ်စား ခိုးစားပြီး ဝက်ဖြစ်နေတာကြည့်
plz next time look at the face of someone you will vote. because sometimes the face says it all...
Author — Linn Htet maw
Author — Koala garoo
အမေရိကန်ကို လှောင်ပြောင်နေတဲ့သူတွေ ကိုယ့်နိူင်ငံမှာ အဲလောက်ဖြစ်ရင် အကုန်‌ဒုက္ခရောက်မှာကို မမေ့ကြနဲ့
Author — Funny Dog & Cat
Daw yi yi Aung is very pretty can’t imagine when she were young age
Author — Lulu Angela
Great Painter At Thailand. Kachin Painter Not Like This. Kachin Painter Is Messy Painter.
ကာဇက်စတန်လေယာဉ်ပျက်ကျမှု လူအများစု အသက်ရှင်ကျန်ရစ် - BBC News မြန်မာ
စေနေန႔ ေမ ၂၃ ၂၀၂၀ တီဗီြမဂၢဇင္း